‘कोरोना ल्याब’ का योद्धा : ‘स्वाब जाँच्दा रिजल्ट नेगेटिभ होस् भन्ने कामना गरिरहन्छौं’ – Health Post Nepal
२०७७ जेठ १७ गते ९:०३
उदयपुरको भुल्के कोरोनाको हट स्पट बनिरहँदा कोशी अस्पतालमा परीक्षणको चाप बढेको थियो। देशमा फाट्टफुट्ट मात्रामा कोरोना संक्रमित फेला परिरहेको समयमा भुल्केमा एकै पटक १३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि झस्किएको थियो।
र, त्यही प्रयोगशालाको नेतृत्व सम्हालेका व्यक्ति हुन् क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट प्रणवकुमार यादव। थोरै जनशक्तिका बीच पनि उनको मोर्चाले कुसलतापूर्वक काम गरिरहेको छ। सोनो टिम भएपनि तीन समूहमा बिभाजित भएर उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। तिनै कोशी अस्पतालको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालाका प्रमुख यादवसँग हेल्थपोष्ट नेपालका लागि यज्ञराज जोशीले गरेको कुराकानीः
कोशी अस्पतालमा सञ्चालित ल्याबमा अहिले कारोना परीक्षणको काम कसरी भइरहेको छ?
कोशी अस्पतालको ल्याबमा अहिले दैनिक रुपमा तीन सिफ्टमा कोरोना परीक्षणको काम भइरहेको छ। भारतबाट आउने मानिसका कारण कोरोना परीक्षणको दायरा बढ्दो छ। त्यसैले नमुनाको परीक्षणको चाप पनि दिनहुँ बढ्दो छ। त्यसैले अहिले हामीले तीन सिफ्टमा काम गरिरहेका छौं।
सुरुवाती दिनमा यहाँहरूले के कस्ता समस्या खेप्नु परेको थियो?
कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्दा समस्या र चुनौति दुबै हुन्छन्। सुरुआती दिनमा हामीले पनि केही समस्या र चुनौतिको सामना गर्नु परेको थियो। जस्तो हामीसँग पहिले जनशक्ति निकै कम थियो। स्वाब परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको पनि समस्या उस्तै हुन्थ्यो। तर, अहिले सहज भएको छ।
कोशी अस्पतालमा कोरोना ल्याब प्रमुखको रुपमा खटिँदा कस्तो महशुस गर्नु भएको थियो?
म उदपुर जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत छु। चैत २७ गते स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रादेशिक प्रयोगशाला बिराटनगरले मलाई कोरोना ल्याब सञ्चालनका लागि पत्र पठायो। मलाई त्यसरी जिम्मेवारीमा खटाउँदा म निकै खुसी र उत्साहित थिएँ। किनकी मेरो पेशा नै सेवा गर्ने हो। यस्तो विषम परिस्थितिमा देश र जनताको सेवा गर्न पाउँदा निकै खुसी महशुस गर्छु।
अहिले यस्तो अप्ठ्यारोका बीच पनि धेरै मानिसको नमुना परीक्षण गरेर स्वास्थ्यवस्था बारे जानकारी दिन पाउँदा खुसी लाग्छ।
परीक्षण गरिरहँदा कस्तो महशुस हुन्छ?
सधै परीक्षण गर्दा सबैको नमुना नेगेटिभ नै आओस् भन्ने कामना हुन्छ। नेगेटिभ आइरहँदा खुसी लाग्छ।
भुल्के हटस्पट बनिरहँदा तपाइले निकै प्रेसरमा काम गर्नु परेको थियो होला, अहिले त संक्रमितको संख्या थपिँदो छ, कसरी काम गरिरहनु भएको छ?
भुल्केलाई त नेपालको वुहान पनि भनिएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक हाम्रो पटक हाम्रो कोशी अस्पतालको ल्याबमा एकै पटक १३ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखियो। र, पछि त्यस ठाउँबाट आएका फेरी पनि पोजेटिभ देखिने क्रम जारी रह्यो। त्यस ठाउँबाट थुप्रै कन्ट्याक ट्रेसिङका नमुना आएका थिए। तिनीहरूको परीक्षण दूर्त गतिमा गर्नु पर्ने थियो र हामीले भ्याए जति चाडो काम गरेर रिपोर्ट दिएका थियौं।
जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ?
हामीसँग सिमित जनशक्ति छ। अहिले पनि ५ जना टेक्निकल र ३ जना कार्यालय सहयोगीहरू छन्। यति थोरै जनशक्तिका वावजुद् पनि हामी तीन सिफ्टमा काम गरिरहेका छौं।
किटको अवस्था कस्तो छ?
परीक्षणका लागि चाहिले चाहिने रिएजेन्ट र किट्सको व्यवस्था केन्द्र, प्रदेश सरकार र कोशी अस्पतालले गरिरहेका छन्। सिमित जनशक्तिले काम गरेर रिपोर्ट छिटो दिनुपर्ने हुन्छ। सके जति हामीले काम गरिरहेका छौं। अहिले त्यस्तो खासै समस्या छैन।
दिनहुँ कारोना संक्रमितको स्वाब परीक्षण गरिरहँदा दिक्क पनि लाग्दो हो नि ह?
पेशाले म एउटा प्रयोगशालाकर्मी हुँ। र, मैले काम गर्ने ल्याब नै हो। त्यसैले दिक्क मानेर हुँदैन। यो संकटको बेला अरु कुरा सोच्ने समय नै हुँदैन। कसरी बढीभन्दा बढी स्वाब परीक्षण गरेर सरकार र जनतालाई सेवा पु-याउने भन्नेमा नै ध्यान केन्द्रित हुन्छ। अर्को जति सुकै गाह्रो परे पनि पेसामा दिक्क मान्नु हुँदैन। सबै कामको सम्मान गर्नुपर्छ।
तपाईंले भनेजस्तै कामको प्रेसर छ। दैनिक दुई/तीन सिफ्टमा काम गर्नुका साथै अन्य व्यवस्थापन पनि गर्नु परिरहेको छ। यस्तो गर्दा थकान र तनाव महशुस हुन्छ नै। तनाव भएको समयमा म फोन गरेर मेरो ९ महिनाकी साथी छोरीसँग कुरा गर्छु। उसको तोते बोलीले मेरो सबै थकान मेटाइदिन्छु।
तपाईंले परिवारसँग भेट्न नपाएको कति भयो?
मैले परिवारसँग भेट्न नपाएको दुई महिना भयो। सधै म परिवारलाई सम्झिरहेको हुन्छु। तर, अहिले मैले मेरो परिवारसँगको भेटभन्दा पनि जिम्मेवारी नै ठूलो हो भन्ने कुरा बुझेको छु। र, बेला–बेला मन बहकिँदा जिम्मेवारीलाई नै सम्झेर सम्हालिन्छु।
कोरोनाको परीक्षणमा खटिनु भएको छ, परिवारका सदस्यले के भन्छन्?
जोखिम छ। तर, मेरो पेशा त्यही नै हो। काम त गर्नु नै पर्छ। बुवाले पनि मलाई यसै भनेर हौसला दिइरहनु भएको हुन्छ। परिवारका अन्य सदस्यले पनि सुरक्षित साथ काम गर्नु भन्नु हुन्छ। पिपिई लगाएर काम गरेको र आफू सुरक्षित रहेको सुनाउँदा आमा पनि खुशी व्यक्त गर्नुहुन्छ।
नेपालको हकमा अहिलेको परिस्थितिमा के भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ?
परीक्षणको दायरा थप फराकिलो पार्नुपर्छ। -यापिड टेस्ट गर्दा सुरुमा संक्रमण पत्ता लाग्दैन। तर, पिसिआरले संक्रमण भएको दुई/तीन दिनमा पत्ता लाग्छ। अहिलेको अवस्थामा पिसिआरको दायरा बढाउनु पर्छ। कुनै पनि परीक्षण आफैमा सतप्रतिशत पूर्ण नभए पनि पिसिआर गर्यो भने धेरै हदसम्म ढुक्क हुन सकिन्छ।
तपाईंहरूले अहिलेसम्म कति जनाको परीक्षण गर्नुभयो?
कोशी अस्पतालमा चैत २८ गते बाट ल्याब सुरु भएको थियो। र, अहिलेसम्म हामीले तीन हजारभन्दा बढी परीक्षण गरिसकेका छौं। जसमा १ सय १४ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ।
अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ?
सबैको साथ र हौसला पाएका छौं। त्यसका लागि हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई लकडाउनको पालना गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र, सामाजिक दूरी पनि कायम गरिदिनुहोला भन्न चाहन्छु। खुसीसँग बस्नुस्, धेरै तनाव नलिनुस्, व्यायाम गर्नुस् भन्न चाहन्छु।